अस्ट्रेलीया आए पछि गफ दिन चाही मज्जैले जानियो - eNepal
अस्ट्रेलीया आए पछि गफ दिन चाही मज्जैले जानियो
by Manoj Poudyal April 14, 2019 0223
मेल्बोर्नको चिसो, पानी फुस्फुस परि रहेको थियो। घामको मुख आक्कल झुक्कल देखिने यो मेल्बोर्नमा अक्सर जाडोनै बढी हुने गर्छ। सवैको एउटै रुटीन अलार्मको तालमा उठ्यो। हुन त तातो व्लेङ्कट फाल्न हम्मे हम्मेनै पर्छ तर पापी पेटको सवाल छ। पेटको भन्दापनि कलेजको फी पुर्याउन सकिन्छ कि सकिदैन त्यसले बढी पेट पोल्छ। आँखा मिच्दै ट्रेन स्टेसन गएँ। समय भन्दा केही ढिला ट्रेन आयो। ट्रेन खासै भरिएको थिएन। गएर एक कुनामा बसे। छेउमा नेपाली खासखास खुसखुस गरेको सुनियो। नेपाली बोले पछि आँखा जानु स्वभावै थियो।
हेर्दा भर्खरै मेल्बोर्न आएका जस्ता देखिन्थे। कलेजको कुरा दुवैले गरेको सुन्दा जहाँ सम्म दुबै बिधार्थी हुन पर्छ। फेरी कुरा गरेको सुन्दा सँगै बस्ने साथी जस्ता पनि थिए। केटा भन्दै थियो हिजो कन्सल्ट्यान्सी गएर आएको शायद एकजना डिपेन्डेन्टमा बस्न मिल्छ होला। दुवैले कलेजको फि त कसरी तिर्ने। बरु तिमी स्टुडेन्ट बन म डिपेन्डेन्टमा बस्छु अनि मस्त पैसा छाप्न पर्छ। फेरी घरमा थाहा पाए भने मार्छन्- केटी अन्कानाउँदै थिई। किन भन्न पर्यो र अहिले घरमा। पछि समय आएपछि भनौला। अव बिदेश गएका छोरा छोरी बुझी हाल्छन्। फेरी हाम्रा बा आमा त्यस्तो नेरो माईन्डेटका नि छैनन्।
भए पनि गार्है हुन्छ नि भन्नलाई तिमीलाई जस्तो सजिले कहाँ हुन्छ र हाम्रो घरमा त गार्है हुन्छ। छोड्देउ यी कुरा पछि समय आएपछि समयले बताउँछ। लाग्थ्यो कि केटा अलिक सिरीयस छैन तर केटी सिरीयस छ त्यो रिलेसन्सिपमा। उ क्षणीक स्वार्थको लागि त्यो सव गरि रहेको छ। मौकामा चौका हान्ने दाउमा छ। यसो जोडीलाई फेरी फर्केर हेरे। आलाकाँचै थिए। शायद परिपक्का र जिम्बेवारी नभएको जस्तो देखिन्थ्यो।
खैर जे सुकै होस् बिदेशमा एक्लै महङ्गो कलेजमा पढ्न आएको उपज हो जस्तो लाग्यो। आत्तिएर के के न छ बिदेशमा, केबल रमाईलो र मस्ती मात्र हुन्छ भन्ने शोचले आएका केटा केटी जस्तो लाग्यो। बाउ आमाको पैसामा बुई चडेर लखरलखर डुलेर त्यहि सम्झिदै बिदेशमा कामको अनुभव खासै नगरेको जोडी जस्तो लाग्यो।
बिच बाटोमा ट्राफीक भयो भन्दै केही बेर ट्रेन रोकीयो। नेपालमा जस्तो ट्राफीक यता नि हुने तर कहिले काँही मात्र त्यो पनि ट्रेनको। अच्मम मान्नु होस। यता नि हुन्छ ट्राफीक ल लोडसेडीङ तर आक्कल झक्कल मात्र। सबै हतार हतार फोन गर्दै थिएँ। काममा आउन ढिला भो भन्दै। फेरी यता समयको एकदम ख्याल राख्छन्। नेपालको जस्तो १० बजे पुग्न पर्ने कामलाई एघारमा पुग्दैनन्। यदि ढिला भई हाले पनि कारण सहित तुरुन्तै जानकारी दिन्छन्। धेरै बेर पनि रोकीएको थिएन मात्र पाँच मिनेट थियो ट्रेन तर सबै मोवाईलबाट जानकारी दिएको गाँईगाई गुँईगँईबाट प्रस्ट थाहा हुन्छ।
मेरो गन्तव्य आयो ट्रेनबाट झरे। यसो बाटो क्रस गर्नै लाग्दा चारपाँच जना केटाहरुको समुह देखे। कोही चरोट उडाउँदै थिए, कोही बिदेशी लिक्युडवाला पाईप तान्दै थिए। लाग्थ्यो कलेज जान हतारमा छन्। एउटाले प्वाक्क बोल्यो ओई सेभेन ईलाभेनको एक डलरको कफी ख्वान। के चरोट मात्र तान्नु। अर्को छेउको साथीले उसलाई खिल्ली उडाउँदै कहाँ यस्तो सस्तो कफीनी खाने । हिड उत्यो क्याफेमा क्यापिचीनो खुवाउँछु। अर्को बोल्यो ओ हो पैसा थापीस् कि क्या हो। ल ल जाउँ जाउँ आज यसको नाममा म चाँही कफी लाट्टे खान्छु। पिछाडीबाट अर्को साथीले हाँस्दै भन्यो चिया खान बुबाको खल्तीबाट दश रुपयाँ झिक्नेहरुले बिदेश आएर रातारात परिबर्तन हुँदै क्यापिचीनोवाला गफ दिएको कत्ति पनि नसुहाएको यार धरोधर्म। सबै गलल हाँसे। मै मोरो पनि खिस्स हाँसे लागे आफ्नो कार्यलय तिर।
२०७५ का ८० फ्लप चलचित्र
मेलबोर्न सहरमा New Year Dhamaka 2076 कार्यक्रमको आयोजना हुदै
Neplay Events coordinator
ओई साथी बजारमा अस्ट्रेलीया आउनलाई भए नि बिवाह गर्ने लर्को चलेको छ रे नि
Manoj Poudyal March 11, 2018
अस्ट्रेलियाको भिषण आगोलागीमा परि मृत्यु हुने जनावरको संख्या ४८ करोड भन्दा बढी पुगेको अनुमान
enepal January 3, 2020
अस्ट्रेलीया गएर हराउने, डिप्रेसनको शिकार, आत्महत्या गर्न लालाहित युवालाई नेपाल आमाको पत्र
Manoj Poudyal January 4, 2018 January 4, 2018
ईनास भिक्टोरीयाले गर्यो नेपाली लोक कलाकारहरुको सम्मान
सिड्नीमा पहिलोपटक बहुरास्ट्रिय सांगीतिक कार्यक्रम हुदै !!
अस्ट्रेलीयामा चलेको ट्रेन्ड
भिक्टोरीयामा पहिलो पटक न्याभ बहुसाँस्कृतीक सकर प्रतियोगिता हुँदै
दिदीबहिनी समाजले “Happy Women Happy Family” योजना अन्तर्गत मेल्बोर्न पश्चिममा कार्यक्रमहरु गर्दै
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा पाए सफाई
शेर्पा समुदायको ‘२१४७ औं ग्याल्पो लोसार’ सिड्नीमा भब्य रुपमा मनाइदै!!
मेल्बोर्नमा प्रत्यक्ष दोहोरीको साथमा डिजे साँझ हुँदै
बुद्धि तामाङ, अग्रज केसी, सृजना सुब्बा अभिनीत “धुलो” प्रदर्शनको लागि तयार
मेल्बोर्नका संजय सेन्चुरि र कपील सापकोटाको “तिम्रो लागि” यस्तो बन्यो
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत वेबसाइट ह्याक
भिक्टोरीयामा प्रथम न्याभ बहुसाँस्कृतीक सकर प्रतियोगिता हुँदै, न्याभकप क्रिकेटको फाईनल २३ फेब्रुअरीमा
अष्ट्रेलिया आउनुभएका अभिभावकहरुका लागि न्यु साउथ वेल्समा वनभोज मेला !!
नेपाली नाईट्सले सिड्नीमा दोश्रो पटक ब्याटल अफ दि ब्याण्ड प्रतियोगिता गर्दै
राजनीतिक भातृसंगठनमा पदलिने एनआरएनए कार्यसमितिका सदस्य लाई एनआरएनएले बर्खास्त गर्ने !!
मेल्बोर्नमा दुई दिने मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार तालीम सम्पन्न
मेल्बोर्नमा बुबा आमाद्वारा यसरी गरियो श्रीस्वस्थानी पुजाको समापन (फोटो सहित)
अर्घाखाचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा एउटै बोका १७० किलोको !!
अस्ट्रेलियाको सिड्नी लगाएत पुर्विय तटमा भारि वर्षा, बाढि आउने सम्भाबना उच्च
नेकपाले प्रवास कमिटी तोक्यो स्पेन बाट हेम शेर्पा र अशोक किरण न्यौपानेले नेतृत्व गर्ने !!